Amụma nkwụghachi & nloghachi • Sadoun Sales International
Nkume Crystal Nkume Quartz Ngwọta Ngwọta 1PC
BREA Snail Face Cream Ude Hyaluronic Acid Moisturizer Anti Wrinkle Anti Aging Na-edozi Ahụ Mmiri Collagen Whitening Skin Care
Emụ nwanyị mara mma Akpụkpọ anụ Jirinụ akpa
gosiri 4.59 si 5
NO.ONEPAUL ehi ezi akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ okomoko eriri nwoke maka nwoke ọhụrụ ejiji classice vintage pin ikechi nwoke belt High Quality
gosiri 4.65 si 5
Ebe a ga -akpọ ụlọ: ọdịnala, ụdị, na ebe nchekwa na New American House
Womenmụ nwanyị Yoga Na-enweghị Ahịrị Set Set Suits 2021
3D 3M Auto Carbon Fiber Vinyl Film Kechie Sheet Roll (6 ″ W x 50 ″ L)
Ndị nwoke Winter oyi oge Hiking Trekking ịkụ azụ maa ụlọikwuu na-arị elu na-agba ọsọ ogologo ogologo ọkpa Plus Size Oversized Waterproof Outdoor Fleece Pants
Anker Soundcore Flare Mini Bluetooth Speaker IPX7 Waterproof for Parties Parties
Afọ ojuju gị bụ ihe kacha anyị mkpa #1.
Rịọ ikike ịlaghachi Kpọtụrụ Anyị
Nlaghachi na Mgbanwe
Ọ bụrụ na n'ihi ihe ọ bụla ị ga-achọ ịgbanwe gị ngwaahịa, ikekwe n'ihi na a dị iche iche size na uwe. Ị ga-kpọtụrụ anyị buru ụzọ na anyị ga-eduzi gị site na nzọụkwụ.
Iwu nkwụghachi na nloghachi anyị na -ewe ụbọchị 15. Ọ bụrụ na ụbọchị iri na ise agafeela kemgbe ị nwetara nzụta gị, anyị enweghị ike ịnye gị nkwụghachi ma ọ bụ mgbanwe zuru oke.
Iji bụrụ onye ruru eru maka nloghachi, ọ ga-abụrịrị na ihe ị ga-eji mee ihe ma n'otu ọnọdụ ahụ ị natara ya. Ọ ghaghị ịbụ na nkwakọ ngwaahịa mbụ.
A na-ahapụ ụdị ngwá ahịa dị iche iche na ịlaghachi. Enwere ike ịlaghachi ihe ngwongwo ndị dịka nri, okooko osisi, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ magazin. Anyị anaghị anakwere ngwaahịa ndị dị mma ma ọ bụ nke dị ọcha, ihe ize ndụ, ma ọ bụ mmiri ọkụ ma ọ bụ gas.
Ihe ọzọ na-abụghị nke a na-enwetaghachi:
Ngwa ngwanrọ software
Ụfọdụ ahụike na ihe nlekọta onwe onye
Iji mezue nloghachi gị, anyị chọrọ ka azụmahịa ma ọ bụ akaebe nke ịzụta.
Biko, ezigala zụrụ azụ gị.
Weghachite usoro gị maka nkwụghachi:
Ọ bụrụ na ịchọghị ngwaahịa ị nwetara ma ọ bụ nata ihe adịghị mma
Rịọ maka nọmba ikike nloghachi tupu ibughachi ihe ahụ.
Ị ga -eweghachite ihe ahụ na mmefu gị yana ihe ahụ ga -ejighi ya mee ihe.
Onye na-azụ ahịa na-ahụ maka ụgwọ nke mbughachi mbupu ma ọ bụ mgbanwe.
Enwere ego nkwụghachi ụgwọ 20% na nloghachi niile na ọnọdụ ọhụrụ.
A ga -ewepụ ụgwọ mbupu mbụ anyị na nkwụghachi.
A ga -enye nkwụghachi n'ime ụbọchị 15 ma ọ bụ nata nloghachi gị.
Ekwesịrị iziga nloghachi na adreesị dị na anyị kpọtụrụ anyị page.
Obi ụtọ gị bụ #1 kacha mkpa. Ya mere, ị nwere ike ịrịọ nkwụghachi ma ọ bụ nkwụnye ụgwọ maka ngwaahịa iwu ma ọ bụrụ:
ị naghị anabata ha n'ime oge a ga-ekwe nkwa (oge 45 gụnyere gụnyere nhazi 2-5 ụbọchị)
Anyị anaghị enye nkwụghachi ma ọ bụrụ:
iwu gị adịghị abịa n'ihi ihe ndị na-achịkwa gị (dịka inye adreesị ọdụ ụgbọ na-ezighị ezi)
iwu gi adighi abia n'ihi nsogbu ndi ozo n'adighi ike anyi (dika ndi n'emeghi ka omenala ndi mmadu ghara iru ya, ndi mmadu na-egbu oge).
Anyị agaghị akwụghachi ụgwọ ebubo ọ bụla na ụgwọ njikwa maka mbupu ebupụtara.
Nwere ike ịnye arịrịọ nkwụghachi azụ n'ime ụbọchị iri na ise mgbe oge ekwenyechara maka nnyefe (15 ụbọchị) gafere.
Nwere ike ime ya site na izipu ozi na Kpọtụrụ Anyị page.
Ozugbo a natara nzaghachị gị na nyochaa, anyị ga-ezitere gị ozi email iji gwa gị na anyị anatala ihe ị laghachiri. Anyị ga-agwakwa gị maka ihu ọma ma ọ bụ ịjụ nkwụghachi gị.
Ọ bụrụ na ị na-mma n'ihi na a nkwụghachi, mgbe ahụ, gị nkwụghachi ga-esichara, na a n'aka ga-akpaghị aka a n'ọrụ gị kaadị ma ọ bụ mbụ usoro nke ịkwụ ụgwọ, n'ime 14 ụbọchị.
Nkwụghachi azụ ma ọ bụ na-efu
Ọ bụrụ na ị natabeghị nkwụghachi ụgwọ, buru ụzọ lelee ụlọ akụ gị.
Mgbe ahụ kpọtụrụ kọntaktị gị na kaadị akwụmụgwọ gị, ọ nwere ike iwe oge tupu akwụsịrị gị ego.
Na-esote kọntaktị gị. E nwere mgbe ụfọdụ oge nhazi tupu a kwụọ ụgwọ.
Ọ bụrụ n’ịmela ihe ndị a niile ma ị natabeghị nkwụghachi gị, biko Kpọtụrụ Anyị
Ihe ọrịre na nso nso
Naanị ihe nwere ọnụ ahịa oge niile ka enwere ike nkwụghachi. Enweghị ike ịkwụghachi ihe ọrịre.